Madasha Xisbiyada oo ka hadashay isku day lala damacsanyahay M.weyne Sheekh Shariif iyo wasaaradda amniga oo war kasoo saartay - BANDHIGA
Madasha Xisbiyada oo ka hadashay isku day lala damacsanyahay M.weyne Sheekh Shariif iyo wasaaradda amniga oo war kasoo saartay
War qoraal ah oo goor dhaw kasoo baxay madasha xisbiyada Qaran ayaa lagu cambaareeyay weerar gaadmo ah oo lala damacsanaa madaxweynihii hore ee dalka Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmad iyo xarunta madasha xisbiyada Qaran oo Shariif hogaaminayo.
Waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in madaxda Dowladda Federalka ay ka dambeeyaan qorshahaas oo dalka qalqal siyaasadeed iyo mid amni ku abuuri kara.
“Habeenadii isku xigay ee taariikhda aheyd 22 iyo 23 March waxaa jiray isku day ciidamada ku hareereeyeen hoyga Sheekh Shariif” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay madasha.
Dhanka kale Wasiirka amniga ayaa beeniyay warkan oo yiri” “Ma jiro ciidan dowladeed oo la dul dhigay ama weerar ku ah madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo naga wada mudan ixtiraam. Waxaan caddeynayaa in warkaasi yahay been abuur aan sal iyo raad lahayn oo ay wadaan dad ujeedkoodu yahay fitno iyo colaad abuur ayuu yiri” Wasiirka Amniga.
By : Press room Tags: Madasha Xisbiyada oo ka hadashay isku day lala damacsanyahay M.weyne Sheekh Shariif iyo wasaaradda amniga oo war kasoo saartay
Wax kabadan ka ogoow caabuqa Hantavirus oo Shiinaha ka dilaacay